အားလုံး FBS ဝန်ဆောင်မှုများ Forex အကြောင်း MT လက်တွေ့သင်ခန်းစာများ
Forex ဈေးကွက်သည် အခြားဈေးကွက်များနည်းတူ အစားအသောက်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများအစား လူအများ ငွေကြေးရောင်းချသည့်နေရာ ဖြစ်ပါသည်။
သင်ခန်းစာ ၁. မိတ်ဆက်
မင်္ဂလာပါ Forexအရောင်းအဝယ်အကြောင်း အခြေခံအဆင့် သိကောင်းစရာများမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ငွေကြေးအရောင်းအဝယ်အကြောင်းကို အခုမှစတင်လေ့လာမယ့်သူများအတွက် အထူးစီစဉ်သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
သင်ခန်းစာ ၂. Forex အရောင်းအဝယ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
၂. ၀က်ဆိုဒ်၏ ညာဘက်ဒေါင့်နားရှိ"အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်ပါ" ဆိုသည့်စာမျက်နာကို ကလစ်လိုက်ပါ. စာရင်းပေးသွင်းရာတွင် လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်စွက်ပေးလိုက်ပါ. ထို့နောက် ပါစင်နယ်ဧရိယာတစ်ခု ရရှိပါလိမ့်မည်.
သင်ခန်းစာ ၃. Forexဈေးကွက်ရဲ့ ကောင်းကွက်တွေက ဘာတွေလဲ?
ငွေရှာတဲ့နေရာမှာ Forexဈေးကွက်မှာ ရောင်းဝယ်ပြီး ငွေရှာဖို့ အကြောင်းပြချက်တွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်: ငွေဖြစ်လွယ်မှုများပြီး ဈေးကွက်အတက်အကျ ကြမ်းမှု. ငွေဖြစ်လွယ်တယ်ဆိုတာကတော့ ဒီဈေးကွက်က ငွေကြေးအများကြီးနဲ့ လည်ပတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် - တနေ့ တနေ့ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်နေတဲ့ ပမာဏက ၅. ၃ ထရီလျှံကျော်တောင် အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်.
သင်ခန်းစာ ၄. ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေက ဘာတွေလဲ?
ဆက်ပြီး မလေ့လာသေးဘဲ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ်တွေအကြောင်း ပြောလိုက်ရအောင်.
သင်ခန်းစာ ၅. Forexအရောင်းအ၀ယ်လုပ်ပြီး ၀င်ငွေဘယ်လောက်အထိရှာနိုင်မလဲ?
ခဏလောက် သေချာဂရုစိုက် နားထောင်ရမယ့် အကြောင်းအရာကို ပြောပါတော့မယ်.
သင်ခန်းစာ ၆. ငွေကြေးအတွဲများ၊ အခြေခံငွေကြေးများနှင့် တွဲဘက်ငွေကြေးများ၏ဈေးနှုန်းဖော်ပြချက်များ၊ အဓိကငွေကြေးအတွဲများနှင့် အရံငွေကြေးအတွဲများ
ဈေးကွက်မှာ ငွေကြေးအမျိုးအစားတွေကိုအရောင်းအ၀ယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အစုံလိုက်၊အတွဲလိုက် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်. သက်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးအမျိုးအစားတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုသိချင်ရင် အခြားငွေကြေးအမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်.
သင်ခန်းစာ ၇. ငွေကြေးအတွဲများ: pip နှင့် big figure
ငွေကြေးအရောင်းအ၀ယ်ဈေးကွက်မှာ ငွေကြေးတန်ဖိုးကိုဖော်ပြတဲ့အခါ pipနဲ့ ဖော်ပြပေးထားတတ်ပါတယ်.
သင်ခန်းစာ ၈. Bidနှင့်Askဈေးနှုန်း. Spreadကြေးအဟ
ထပ်မံလေ့လာရမှာကတော့ Bidနှင့်Askဈေးနှုန်းအကြောင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ ၀ယ်တဲ့အခါပေးရမယ့်ဈေးကို Askလို့ခေါ်ပါတယ်.
သင်ခန်းစာ ၉. Lot
သင်ခန်းစာ ၁၀. pipတစ်ခု၏ တန်ဖိုးကို တွက်ချက်ခြင်း
ငွေကြေးအတွဲတစ်ခုရဲ့ pipတစ်ခုတန်ဖိုးကို တွက်ချက်မယ် ဆိုရင် ဒသမနောက်က ဂဏန်း (0.0001 သို့မဟုတ် 0.01) နဲ့ သင်ရောင်းဝယ်တဲ့ ငွေလဲနှုန်းပမာဏနဲ့ မြှောက်လိုက်ရုံပါပဲ
သင်ခန်းစာ ၁၁. အကျိုးဆောင်ပွဲစားနှင့် လေ့ကျင့်ရန်အကောင့်များ
အကျိုးဆောင် brokerဆိုတာကတော့ အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး Forexဈေးကွက်မှာ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာတွေနဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေသင့်ကို ပံ့ပိုးပေးမယ့် ကုမ္ပဏီပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ထိုအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီကိုတော့ ၀န်ဆောင်ခအဖြစ် ကော်မရှင်၊ သို့မဟုတ် ပွဲခကြေးအဟအနည်းငယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်.